Fanapahana laser sy fanamarihana fanamafisam-peo anatiny - Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
Machine milina famonoana maoderina
Tube / Fantsakan-tariby laser fantsom-bolo
Dove Ventilation tekstil
Fametahana ny marika, malemy, taratra taratra
Akanjo sy fitafy
Fa maninona no volamena Laser
Fanapahana laser sy fanamarihana fanamafisam-peo ao anaty fiara
Ny indostrian'ny fiara dia mampiasa fitaovana isan-karazany, ao anatin'izany ny lamba, hoditra, fitambarana ary plastika, sns. Ary ireo fitaovana ireo dia ampiharina amin'ny fomba isan-karazany, manomboka amin'ny seza fiara, tsihy amin'ny fiara, paosin-tapisim-baravarana ka hatrany amin'ny sunshades sy airbag.
CO2 tamin'ny laser fanodinana ( fampihenana laser sy ny tamin'ny laser manamarika sy tamin'ny laser perforation tafiditra) ankehitriny mahazatra ao anatin'ny orinasa, manokatra ny azo atao kokoa noho ny anatiny sy ivelany fampiharana amin'ny fiarakodia famokarana, sy ny tolotra tombontsoa maro ny fomba nentim-paharazana mekanika. Ny fanapahana laser mazava sy tsy misy ifandraisany dia manana automatique avo lenta sy malefaka tsy manam-paharoa.
Ny teknolojia fanapahana laser dia ampiasaina bebe kokoa amin'ny indostrian'ny fiara noho ny fatrany avo lenta, haingam-pandeha, avo malefaka ary vokatra azo avy amin'ny fikarakarana tonga lafatra. Ireto manaraka ireto dia vokatra otrikaina na kojakoja ho an'ny atitany sy ny ivelany fiara izay fantatra fa namboarina tamin'ny laser teny an-tsena.
Heater amin'ny seza
Edge amin'ny sivana rivotra
Sleeves foil insulate
Tafo azo ovaina
Fitaovana mandeha amin'ny fiara hafa
Fampiharana azo ampiharina
Fitaovana mahazatra mety amin'ny fanapahana laser laser na marika amin'ny indostrian'ny fiara
Teknolojia, hoditra, polyester, polypropylene, polyurethane, polycarbonate, polyamide, fiberglass, fibre karbonika nohamafisina, foil, plastika, sns.
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fanodinana laser amin'ny indostrian'ny fiara?
Laser fanapahana ny spacer lamba na 3D harato tsy misy distortion
Fanamarihana tamin'ny laser ny fanapahana anaty fiara miaraka amin'ny hafainganam-pandeha
Miempo ny laser ary manisy tombo-kase ny sisin'ny fitaovana, tsy misy fraying
Sokajin-jiro madio sy tonga lafatra - tsy misy ny famoahana post-ilaina
Fanapahana laser sy marika laser amin'ny asa iray
Haavo avo lenta tokoa, na dia ny manapaka antsipiriany kely sy saro-pantarina aza
Tsy misy fitafiana fitaovana - mamokatra vokatra lavorary hatrany ny Laser
Fanodinana azo ovaina - Manapaka ny refy sy ny géometry rehetra araka ny endriny ny Laser
Ny fizotran'ny laser dia tsy misy fifandraisana, tsy misy tsindry mihatra amin'ny fitaovana
Famerenana haingana - tsy mila fananganana fitaovana na fanovana
Torohevitra momba ny fitaovana
Manoro hevitra ireto rafitra laser manaraka ireto izahay amin'ny famolavolana ny indostrian'ny fiara:
Horonan-damba vita amin'ny lamba lehibe sy fitaovana malefaka mandeha ho azy ary manapaka tsy tapaka miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo indrindra sy ny haingam-pandeha.
Galvo & Gantry Laser Milita fanoratana milina
Galvanometer sy XY gantry mitambatra. Fanamarihana laser haingam-pandeha haingam-pandeha sy perforation ary fanapahana laser lehibe Gantry.
Masinina fanamarihana Laser Galvo CO2
Fanamarihana laser haingana sy mazava tsara amin'ny fitaovana isan-karazany. Ny loha GALVO dia azo ovaina arakaraky ny halehiben'ny fitaovana entinao.
Mety ampiasaina ve ny rafitra laser hanatsarana ny fizotranao amin'ny famokarana? Afaka manampy anao izahay hahalala amin'ny alàlan'ny fanandramana santionany amin'ny fitaovana na vokatrao. Ny dingana marobe ao anatin'izany ny fanapahana, ny fanamarihana, ny sokitra, ny perforation ary ny fanorohana oroka dia azo tanterahina. Manolotra fotoana fanodinana santionany haingana izahay, tatitra momba ny fampiharana amin'ny antsipiriany ary torohevitra fatratra avy amin'ireo injenieran'ny rindrambaiko efa za-draharaha. Na inona na inona fizotranao, afaka manampy anao izahay hamantatra ny vahaolana laser tsara indrindra ho an'ny fampiharana anao.
Fahitana Laser Cutter
Fampisehoana manerana izao tontolo izao